अर्घाखाँचीमा कोभिड १९, समुदाय कति सुरक्षित ? – एक चर्चा – Pahilo Update
अर्घाखाँचीमा कोभिड १९, समुदाय कति सुरक्षित ? – एक चर्चा
By Desk Last updated Aug 23, 2020
पहिलो अपडेट भदौ ७, अर्घाखाँची
अर्घाखाँची जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी सहित १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएपछि अर्घाखाँचीमा कोरोना भाइरस समुदायमा गएको पुष्टी मात्रै भएको छैन, अनेक आशंका हरु उत्पन्न गरेको छ ।
दुई जना स्वास्थ्य कर्मी, एकजना कार्यालय प्रमुख तथा एकजना पत्रकार सहित १३ जनामा एकैसाथ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि यसले निम्त्याउन सक्ने खतरा र जिल्लाको लागि जोखिम के हुनसक्छ ? आउनुहोस् यस विषयमा चर्चा गरौं ।
रिपोर्ट नेगेटिभ आओस् वा पोजेटिभ, स्वाव दिइसकेपछि रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म सुरक्षित बस्नुपर्ने राज्यको नम्स भएपनि अर्घाखाँचीमा यो देखिएन ।
– विजय वि.क., सूचना अधिकारी , स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँची
चार जना होम क्वारेन्टाइनका
आज भेटिएका मध्ये चार जना होम क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरु रहेका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकाका २ जना र मालारानी गाउँपालिकाका २ जना होम क्वारेन्टाईनमा रहेका थिए ।
होम क्वारेन्टाइनमा बसेको भनिएपनि लामो समय बस्दा उनीहरु परिवारको सम्पर्कमा पुागेका हुनसक्छन् । यही विचमा परिवारका ती सदस्य कहाँ कहाँ सम्पर्कमा आए ? खोजीकै विषय हुनसक्छ । साथै गाउँ गाउँका विद्यालयहरु खाली रहेकै अवस्थामा उच्च जोखिमयुक्त ठाउँमाशट आएकाशहरुलाई स्थानीय सरकारहरुले होम क्वारेन्टाइनमा पठाएर थप जोखिम निम्त्याउने काम किन गरिरहका छन् ? यसतर्फ सम्वन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।
कार्यालय प्रमुखमा घरबाट आउदा जाँदा संक्रमण भएको हुनसक्ने
आजै संक्रमण पुष्टी भएका एकजना कार्यालय प्रमुख कपिलवस्तु जिल्लामा रहेको र यस विचमा उनी आफ्नो घर आउने जाने गरेको देखिन्छ ।
जोखिमयुक्त ठाउँमा जाने आउनो गरिहँदा उनीबाट अन्य व्यक्तिहरुमा संक्रमणको संभावना देखियो की देखिएन ? यस विषयमा पनि खोजिनिती हुनुपर्ने देखिन्छ ।
निजी कामले गएका अस्पताल गएका पत्रकार पनि संक्रमित
गत साउन ३२ गते आफ्नै निजी कामको सिलसिलामा अस्पतालमा पुगेका थिए आज संक्रमित भेटिएका पत्रकार ।
व्यक्रिगत कामले गएका उनले त्यहाँ स्वाव संकलन भइरहेको देखेपछि साथीको आग्रहमा धेरै हिडडुल गरिन्छ स्वाव दिउँ न त भनेर स्वाव दिए ।
कुनै लक्षण नदेखिएकै अवस्थामा स्वाव दिएपछि उनी स्वाभावैले आफ्नो नियमित काममा लागे । स्थानीय रेडियोमा काम गर्ने उनी क्वारेन्टाइन बसेनन । उनीबाट रेडियोका सहकर्मी हुदै कोरोना कहाँ कहाँ पुग्यो होला ? यसको विस्तृत अध्ययन गरेर परिक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वाव संकलन गरेपछि पनि लखर लखर हिड्नु समस्या
स्वाव संकलन गरिसकेपछि पनि लखर लखर हिड्नु समस्या रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखाँचीका सूचना अधिकारी विजय वि.क.को चिन्ता छ ।
“रिपोर्ट नेगेटिभ आओस् वा पोजेटिभ, स्वाव दिइसकेपछि रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म सुरक्षित बस्नुपर्ने राज्यको नम्स भएपनि अर्घाखाँचीमा यो देखिएन ।” विकले भने “यसले महामारीलाई थप बढाउन सक्छ ।, स्वाव दिनेहरु कमसेकम रिपोर्ट नआउसम्म सुरक्षित बस्दिने हो भने महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने थियो ।”
स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएपछि आकस्मिक र प्रसुती सेवाबाहेक सवै सेवा बन्द
भू.न.पा.–१ का पाँच जनाले घोर आपत्ती व्यक्त गर्दै भने : “हामी जनमोर्चामै छौं”